C/rashiid Janan oo isaga baxay Beledxaawo, Ciidamada dowladda oo la wareegay Beledxaawo iyo Doolow - Jowhar Somali news Leader
Home News C/rashiid Janan oo isaga baxay Beledxaawo, Ciidamada dowladda oo la wareegay Beledxaawo...
C/rashiid Janan oo isaga baxay Beledxaawo, Ciidamada dowladda oo la wareegay Beledxaawo iyo Doolow
Wararka ka imaanaya degmada Beledxaawo ayaa sheegaya in Wasiirkii C/rashiid Janan uu isaga baxay degmada gelinkii dambe ee maanta, isagoo caawa ku hoyanaya degmada Mandhera oo dowladda Kenya ku heyso.
Sida wararku sheegayaan C/rashiid Janan ayaa saaka gaaray Beledxaawo, halkaasoo la sheegay inuu ku tagay diyaarad ay leedahay dowladda Kenya.
Wararka ayaa intaa ku daraya in dowladda Federaalka ay wado qorshe ay dooneyso inay kaga go’doomiso Mr Janan inuu gudaha u soo galo Deegaanada Doolow iyo Beledxaawo oo uu awood ku lahaa.
Ciidamo ka tirsan dowladda Federaalka ayaa la wareegay degmooyinka Beledxaawo iyo Doolow, sidoo kale garoonka diyaaradaha Doolow ayay gacanta ku hayaan ciidamada Federaalka.
Maanta ayay aheyd markii dowladda Federaalka ay ka soo saartay waaran caalami ah oo lagu soo qabanayo C/rashiid Janan oo todobaadkii hore ka baxsaday guri lagu haayay, kaddib shan bilood oo dowladda Soomaaliya u xirnaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa xiriir la sameysay Hey’adda Booliska Adduunka Interpol, sidoo kale dowladda Kenya waxay ka dalbatay inay soo qabato oo ay ku soo wareejiso dowladda Federaalka, si Maxkamad loo horkeeno.